Notsapainay tamin'ny video | ny Huawei TalkBand B2 Androidsis
Ny alahady 1 martsa lasa teo, nanolotra ireo karazana fitaovana vaovao tamina hetsika ny mpanamboatra aziatika. Amin'ny lafiny iray dia hitantsika ny takelaka Huawei MediaPad X2, fitaovana iray izay Nofakafakainay tamin'ny horonan-tsary izany ary nahatonga fahatsapana lehibe ho anay ary amin'ny lafiny iray hafa dia misy ny smartband vaovao avy amin'ny mpanamboatra: ny Huawei TalkBand B2.
Fitaovana iray izay tsy hampiasaina ho toy ny tarika marani-tsaina fotsiny, fa noho ny headset Bluetooth dia azontsika ampiasaina izy io hiantsoana sy handraisana antso. Mahereza, amboary ny paosinao satria somary lafo ny hatsikana. Andeha hiroso isika fanadihadiana video izay nanandramana ny TalkBand B2 tao amin'ny MWC 2015.
TalkBand B2, misy vidiny ny kalitao, tena avo tokoa ve izany?
Araka ny hitanao tamin'ny horonantsary notsapainay ny Huawei TalkBand B2, Zavatra iray mazava tsara: ny endriny dia manintona tokoa ary ny fitaovana premium ampiasaina amin'ny fanamboarana ny vatan'ny Huawei smartband vaovao dia hita miharihary.
Toy ny fitaovana hafa rehetra amin'ity karazana ity, ny Huawei TalkBand B2 dia mamela anao hanara-maso torimaso, fiasan'ny pedometer, famantaranandro ... ho fanampin'ny anao Sensors 7 no hahita ny fanatanjahantena ataonao ary hampihetsika ny kaonteranao eo noho eo izy io. Zavatra izay hankasitrahan'ny clueless indrindra.
Izy io koa dia misy fiasan'ny Bluetooth azonao atao ny mampiasa ilay fitaovana hiantsoana na handraisana antso. Ao amin'ny horonantsary dia nandinika ilay maodely tamin'ny fehikibo hoditra izahay, na dia hisy aza ny kinova hafa misy fehikibo vita amin'ny fingotra. Ny olana dia miaraka amin'ny vidiny.
Ary antenaina fa ny Huawei TalkBand B2 dia mitentina 169 euro ho an'ilay maodely amin'ny fehin-kibo, raha toa ka 199 Euro ny kinova vita amin'ny hoditra. Vidiny izay toa mihoapampana amiko noho ny volon'ity karazana ity, na dia ilaina aza ny mijery raha toa ka mamoaka ny Huawei TalkBand B2 amin'ny vidiny ity mpanamboatra Aziatika ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » MWC 2015: Notsapainay ny TalkBand B2 an'ny Huawei